Ikhaya elimangalisayo eWaldthurn elineWiFi kunye namagumbi okulala ama-3
Yonwabela iholide yokuphumla kule ndlu yasefama. Yiba namava ento ekhethekileyo kweli khaya leeholide elikumazantsi eemitha ezingama-801 zentaba ephakamileyo kwilali ebizwa ngokuba yi-Oberbernriethin, iOberpfälzerforest entle. Apha unokungqina ukutyiswa kwezilwanyana ezigcinwe kwiindawo ezivalelwe kuzo. ITerassenbad ePleystein ime malunga neekhilomitha ezi-4 ukusuka apho. Ukutyelela eTerassenbad kuyacetyiswa. Indlela edumileyo yebhayisekile yaseBocklin idlula kule ndawo. I-Weiden inesikhululo somkhenkce kunye nebhafu ye-thermal kunye nenkundla ye-squash. Qala uhambo olujikelezayo ukusuka apha ngemoto kwiBurgstrasse edumileyo. I-Oberpfälzer (ihlathi eliPhezulu lePalatinate) linemyuziyam enomdla kwaye kufanelekile ukuyindwendwela. Iintlambo zaseWaldnaab, ePfreimd, eLerau naseLuhe zibonelela ngamathuba amahle okuhamba. Inkanunu yekhephu kunye ne-ski lift ene-floodlighting ifumaneka ngqo kwisiza. Kukho indawo yokunyusa umntwana egadiweyo kunye nesikolo sabantwana sokutyibiliza ekhephini.
Imigama: ithuba lokuloba 1 km / ukuthenga 4 km / Amanye amanzi okanye indawo yokuqubha.(iphuli yoluntu yangaphakathi) 10 km / ivenkile yokutyela 1 km / idolophu ekufutshane(Weiden/Opf.) Vohenstrauss) 1.1 km / amanzi(Ichibi lokudada elivulekileyo) 4 km / ukutyibilika kwelizwe 1 km